Fengshui2Share4 (ဖုန်းရွှေကိုလေ့လာမိသမျှ)UNDER RENOVATION, BE BACK ON 9TH SEPTEMBER
This blog is about uses of Fengshui study. I want to share the thing that i had read and learnt, to the people who are interested in this subject. It was written by Myanmar Language using Myanmar Unicode Font
For 2014-Feb-14, Friday Full Moon day on Valentine
Valentine day မှာ အချစ်သစ်ကို ရှာချင်တဲ့ကိုကို မမ တွေအတွက် ယတြာတစ်ခုပေးမယ်။ ၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ က အရမ်းထူးခြားတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ။ Valentine day, Chinese Valentine day အပြင် တပို့တွဲ လပြည့်နေ့ပါ။ လပြည့်ဆိုတာ အမဓာတ်များလို့ အရင်ကတည်းက အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် လရောင်ခံတဲ့နည်းတွေသုံးပါတယ်။ ဒီညလည်း ချစ်သူ လိုချင်တဲ့သူတွေ ကိုယ်လိုချင်တာကို စာရွက်လေးတစ်ရွက်ပေါ်ရေး ပန်းရောင်မိုးပျံပူပေါင်းမှာကပ်၊ ညကျ လရောင်အောက်မှာ အဲဒီ ပူပေါင်းကို လွှတ်လိုက်ပါ။ ချစ်သူစုံတွဲတွေကလရောင်အောက်မှာလမ်းလျှောက်ဖြစ်အောင်လျှောက်နော်။
TO READ WITH ZAWGYI FONT
ရေးသားသည့်အချိန် 5:58 AM
Chinese valentine day (နှစ်သစ်မှာအချစ်ရေးကံကောင်းစေဖို့)
ခုတလော စာမရေးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာခဲ့သပေါ့။ ဒီစာလေးကို ခုမရေးဖြစ်ရင် နောက်ဘယ်တော့မှ ရေးလို့ရမှာမဟုတ်တော့လို့ အမြန်ထရေး လိုက်တာပါ။ တင်တာတောင်နည်းနည်း နောက်ကျသွားပါတယ်။
ရေးသားသည့်အချိန် 7:00 AM
အကြောင်းအရာ ဖုန်းရွှေနှင့် ပွဲတော်များ, ဖုန်းရွှေနှင့်အချစ်ရေး
Histroy of Hungry Ghost festival:တစ္ဆေကြီးပွဲတော်နဲ့ သမိုင်းကြောင်း
တရုတ်ပြက္ခဒိန်ရဲ့( ၇ )လပိုင်း ( ၁ ) ရက်နေ့ကို ရောက်ပြီဆိုရင် ဝိညာဉ်တွေနေတဲ့ နတ်ပြည်ရော၊ ငရဲရောက တံခါးတွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး လူ့လောကမှာ ရက် (၃၀) လုံး လာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် (၇)လပိုင်း တစ္ဆေများလလို့ ခေါ်တာပါ။ ဒါကတော့ တာအိုအယူဝါဒနဲ့ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အယူဝါဒက ဆင်းသက်လာတဲ့ ရိုးရာဆိုတော့ ထေရဝါဒ အယူဝါဒ အနေနဲ့ကြည့်ရင် တစ်မျိုးတော့ ဖြစ်နေတယ်။
ရေးသားသည့်အချိန် 4:44 AM
အကြောင်းအရာ ဖုန်းရွှေနှင့် ပွဲတော်များ, ရိုးရာ
Taboo for Hungry Ghost Festival and Ghost Month:တစ္ဆေကြီးပွဲတော်နှင့် တစ္ဆေလဆိုင်ရာ အယူဝါဒများ
ဒီလ (၇)ရက်နေ့ဆို တရုတ် (၇)လပိုင်းဝင်ပါပြီ။ တရုတ်ပြက္ခဒိန်ရဲ့ ၇လပိုင်းမှာ တစ္ဆေကြီးပွဲကိုကျင်းပလေ့ ရှိပါတယ်။ ၇လပိုင်းကိုလည်း တစ္ဆေများလလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် july-august (သို့) august-september အတွင်းကျရောက်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွက်ကတော့ august7ရက်ကနေ September4ရက်နေ့အတွင်းကျရောက်ပါတယ်။
ရေးသားသည့်အချိန် 5:05 AM
Fengshui2share4 နဲ့ Android ပြဿနာ
MWDမှာ ၀င်ပါပြီးတော့ traffic တွေတော့ တက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက Android version ပဲထွက်သေးတာဆိုတော့ လာပြီးဖတ်မရတဲ့စာတွေကိုမြင်ပြီး လှည့်ပြန်သွားမယ့် သူတွေကိုတွေးမိတော့ အိပ်မနိုင် စားမရဖြစ်လိုက်ရပါတယ်။ iso version ထွက်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ ဘာမြန်မာဖောင့်မှ မရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ၊ idevice တွေကနေတောင် ဒီ site ကိုဖတ်လို့ရပါတယ်။ စက်ရုပ်တွေကသာ ချွင်းချက်ဖြစ်နေတာ။ အဖြေရှာမရတဲ့အဆုံး အလွယ်နည်းလေးသုံးထားပါတယ်။
ရေးသားသည့်အချိန် 4:20 PM
Fengshui2share4 in Myanmar Website Directory
အရင်လက facebook ပေါ်မှာ android အတွက် web directory တစ်ခုလုပ်မယ်။ blog တွေ page တွေ အလကားထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ ရှေ့ဆုံးကသွားထည့်လိုက်တာပေါ့။ ကဲ july 14 ရက်က Myanmar Website Directory ရဲ့ Application လေးထွက်လာပါပြီ။ တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။
ရေးသားသည့်အချိန် 11:56 AM
Me and this blog: စာရေးသူနဲ့ ဒီblog
ဒီဘလော့က ယုရဲ့ပထမဆုံးဘလော့ပါ။ Fengshuiဆိုတဲ့ topicကို ရွေးတာကတော့ အစကပြောခဲ့သလို စိတ်၀င်စားလို့ပါ။ ကိုယ်လေ့လာ ပြီးသားတွေလည်း တစ်စုတစ်ဝေးတည်းဖြစ် သူများတွေလဲ လေ့လာနိုင်တာပေါ့။
ရေးသားသည့်အချိန် 6:09 AM
Font Download လုပ်ရန်
အရင်လက facebook ပေါ်မှာ android အတွက် web directory တစ်ခုလုပ်မယ်။ blog တွေ page တွေ အလကားထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ ရှေ့ဆုံးကသွားထည့်လိုက်တာပေ...
Problem and Five Element: ကြုံတွေ့နေရသောပြသနာများနှင့် ဓာတ်ကြီးငါးပါး
သင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ မလန်းဆန်းတာ၊ လေးလံထိုင်းမှိုင်း နေတာမျိုးတွေ ခံစားဖူးကြမှာပါ။ ပတ်၀န်းကျင်မှာလည်း သာယာစိုပြေမှု မရှိ၊ မိသားစုထဲ...
Five Element II (မိမိ Element ကို ရှာဖွေခြင်း)
တရုတ်တွေ မွေးနှစ်ကိုပြောရင် ခွေးနှစ်မွေး၊ ၀က်နှစ်မွေးစသည်ဖြင့် အကောင် ၁၂ ကောင်နဲ့ ပြောကြပါတယ်။ zodiac တွေရဲ့သဘာ၀နဲ့ လူရဲ့စိတ်ကို ဗေဒင်ဟောက...
Android phoneကေါ်ကနေဖတ်နိုင်မယ့် Application
Post အသစ်တင်လျှင်mail ပို့ပေးပါမည်
ဤblogမှစာသားများကိုမည်သည့်မီဒီယာတွင်မဆို တစ်စိတ် တစ်ဒေသဖြစ်စေ၊ အားလုံးဖြစ်စေကူးယူဖော်ပြလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ စာရေးသူထံမှ ခွင့်ပြုချက်ယူပါရန်။ . Ethereal theme. Powered by Blogger.